Sheeko dhex martay Fiqi iyo Muuse Yalaxow (Akhriso) – Radio Daljir
Sheeko dhex martay Fiqi iyo Muuse Yalaxow (Akhriso)
Abriil 16, 2019 6:52 b 0
Halkan kore waxaa ku sawiran fiqi oo muu jinaa banaankana keenay Muuse,waxaad markiiba maskaxdaada kusoo dhacaya waa maxay sababta ka danbaysaa ee fiqi shaashada u keenay YALAXOOW? Waa sheeko dheer balse aan soo gaabinaayo.waayadanba waxaa socday in hormarka dhanka wanaaga iyo dawladnimo talaabooyin hore loo qaaday. in shacabkii iyo dawladii isla jaan qaadeen Mogidshana ay inbadan soo hagaagtay dhanka nabad galyada tanoo dawladu shaqo fiican qabatay.
Ciidamadii dalka oo diwaan galin iyo tayayn lagu sameeyay,danmaynkii oo dalkeena laga cafinaayo,xiriir fiican oo maraykanku layeeshay dawladaan iyo taageero uu siinaayo soomaaliya oo buuxda.hormarkaan wuxuu khatar ku yahay qawlaysato ku naaxday dawlad la aanta soomaaliya,oo ah shabakad maafiyo caalami ah oo hor taagnayd mudo aad u dheer in soomaaliya dawladiba ka dhalato kana shaqayso.
Hadaba waxaa laga yaabaa in aad iswaydiiso waa kuwee shabakada maafiyada caalamiga ahi? hadaba waa 3 qolo oo gudaha ah iyo qolo afraad oo dibada ah waa afartaa oo isku xiran. waana sidan.
1.Kuwo xildhibaano ah iyo kuwo siyaasiyiin ah dadka qaarno u yaqaan siyaasiyiinta xanaaqsan. qoladani waxay ku gabadaan xildhibaanimo,siyaasi iyo mucaarad,waxayna kamid yihiin shabakada.
2.Ganaacsatada suuqa bakaaraha,kuwani waa kuwa ku dhuunta ganaacsiga oo ku qariya lacaga hawlaha lagu fuliyo ee ay keenaan dawlado shisheeye,hawlahaas oo lagu horjoogsanaayo dawlad ka hanaqaada dalka iyo nabad ka dhacda mogdisho gaar ahaan.shabakada ayay kamid yihiin
3.Kuwo laba waji leh mid afka ayduubtaan dadkuna u yaqaan shabaab iyo kuwo wajiga aan duuban oo ah ciidanka xooga dalka kuwan oo ah kuwa fuliya hawlaha shacabka lagu gumaado,qarax ama dilal qoshaysan iyagoo amarka ka qaata siyaasiyiinta xanaaqsan iyo ganaacsatada siisa dhaqaalaha. waa shabakada iyaguna
4.Dawlado shisheeye oo dhaqaalaha bixiya oo ay kamid tahay dawlada emaraadka oo sodonkaa sanadood mar dhaw uun la ogaaday iyo dawlado kale kuwanina waa kooxda afraad ee kamidka shabakada maafiyada caalamiga ah ee isku xiran.
Hadaba afartaa oo isku xiran ayaa ah shabakada maafiyada caalamiga ah ee gudaha soomaaliya ka hawlgasha hortaagana dawladnimada soomaaliyeed inay hirgasho.
Hadaba FIQI waa xildhibaan katirsan baarlamaanka soomaaliyeed hadana ah xubin shabakada maafiyada caalamiga ah kamid ah qaybteeda u xilsaaran baarlamanka iyo siyaasada iyadoo mucaarad lahuwanaayo.shabakada ayaa go aamisay in ay dardar galiyaan oo horjoogsadaan hormarka iyo amaanka magaalada mogdisho oo shacabku dareemeen in uu soo hagaagay kuna farxeen. waxay bilaabeen qaraxyo iyo dilal isdaba joog ah si loo yiraahdo Mogdisho nabad maha dawladna kama jirto.
Dawladu talaabo ayay qaaday kuna xakamaysay amaankii maalmihii dhawayd khalkhalka gay ee shacabka lagu gumaaday.waxaana laga qabsaday meelo badan shabaab waana lagu raad joogaa ilaa hada. dalkuna dagaalbaa ku jiraa.hase ahaatee waxaa loo xilsaaray fiqi in uu muuse u tago kana faa iidaysto arimo la xariira degaan uu muuse ka dagan yahay Mogdisho oo kabax layiri maa daama uu yahay dan guud. muuse iyo dawladana wada hadal ayaa u socday caadi ahaa.
Shabakada maafiyada caalamiga ah xubin kasocota waa fiqi ee ayaa habeen madaw gurigiisa si dhuumasho ah uugu tagay muuse oo ka kiciyay hurdadii. waxa uu u sheegay in muuse la dulmiyay magaaladuna tahay magaalo beesha hawiye leedahay,mareexaan iyo daaroodna qabsadeen. waxa uuna usawiray soona xasuusiyay muuse dagaaladii sokeeye wuxuuna aad isugu dayay in muuse ciidan diyaariyo kharashkana uu balan qaaday in labixinaayo. mudo dheer ayay wada hadlayeen oo muuse dhan walba laga tusay in uu beesha kiciyo oo la abaabulo kacdoon beeleed rajiimkana layska tuuro heeryadiisa.
Muuse warkaas waa ku cuslaaday, sidan warka ku hayno Muuse oo ah nin balaayo in badan u soo joogay iyo foolxumo dagaal iyo qabiil intaba hadana ah masuul aqal sare ayaa liqi waayay warkaa fiqi wado oo ah dagaaladii sokeeye dib haloogu noqdo.muuse waa ka aamusay in uu yeelo taladaa fiqi oo yeelay iyo diiday midna ma oran.hayeeshee mardanbaa fiqi ka soo fakatay muuse adiga doqon baa tahay ifahmaynin!!
Muuse waa dhibsaday warkaas iyo kalmadaan u danbaysa ee fiqi. wuxuu yiri muuse Aryaa nin muslim ah day hee lama jeer god lagama qaniino,xaa abgaal dheefay siyaad ka hortagtii doraad adaan ku warsahaa hee? yahooy afxumada igala aal,muuse ma karyo day hee mahaan aa mareexan fadhaa barigii la arkaba ee abgaal isaga dhig yeelmi makaro, adaan ku war sanaa hee xaaka haraaya abgaal mugii dawladii timaadama loo hormarinaayo si loo dhameeyo? Hadaadse daacad qabto adaa keenay farmaajo asaad muga iidiree,xakaa halaysan minaad ciil u qabto mareexaanka aad sheegayso hortaaday fadhaane gal hee ma rag la aan aa ku hayso!! igaar xabad ku dhinto muuse marabyo waxbadan aan usoo joogay xabadse kama dheefin badalkeeda in uu waxbartaan rabaa oo uu nabad galyo helo.
Fiqi oo quus taagan waaguna soo baryaayo,ayaa yiri nin fiican aad iska dhigee dagaal ooge ayaad tahay dad badan laayay maxaa kuu dhawrsoon muusoow? Musee ayaa u jawaaboo yiri Aryaa muuse maalin cad uu dagaal galaayay mana qarsan mana gaadin ciduu la daalaayo,adiga iyo xasan sheekh dadkaa hoos u xasuuqayseen oo adiga naftirkaaga markaad nabad sugida ahayd xabsiga ku tooganaysay maxaabiista dagaal ooge ma aheen miyaa ma muusaa ka dilay soomaali halahaad disheen adinku waa isnaqaane.
FIQI oo caraysan kuna guul daraystay dhagartii loo isticmaalilahaa muuse iyo beeshiisa ayaa irida kabaxay. Waxa kaliya oo uu ku guulaystay in uu helo masawir cadaynaya in uu la kulmay muuse hawshii loodirayna qabsaday taasoo uu ku helay lacagtii loo qowsheeyay ee ay bixisay dawlada emaraadka. muujinta sawirka muuse waa lacag qaali ah oo u bislaatay fiqi tan muuse waa laga hoos bixiyay mana fahmin in fiqi yahay xubin shabakada maafiyada caalamiga ah ka tirsan wuxuuse u haystaa xildhibaan caadi ah!!! laakiin in dadkiisa la galiyo dab waa diiday muuse si cad. tani waa sheekadii dhexmartay muuse iyo fiqi oo kooban.
Waa qalinkii Yuusuf Omar.
Afeef: Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan, kamana tarjumeyso tan warbaahinta Daljir, waa mareeg u furan qof kasta inuu ku gudbiyo ra’yigiisa saliimka ah.
Madaxweyne Farmaajo oo Kormeer kadis ah kutagay xarunta Xaruunta Taliska Ciidanka Booliska ee gobolka banaadir (dhegayso)
Dekeda Bosaaso oo laga hirgaliyah Nidaam cusub oo lagu diiwaan galinayo badeecadaha laguna qaadayo Canshuurta (dhegayso)